Ilay Dia Tsy Hay Hadinoina—Nitsidika Betela Aho
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Catalan Chichewa Cinghalais Dangme Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Ga Galoà Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kabyle Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mingrelian Myama Nahuatl (Afovoany) Norvezianina Oromo Ourdou Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tarasque Tatar Tigrigna Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Valencienne Wallis Xhosa Zoloa tzeltal Éwé
Ilay Dia Tsy Hay Hadinoina
An’aliny isan-taona no mitsidika an’ireo biraon’ny sampan’i Etazonia sy ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah any New York. Antsoina hoe Betela ireny toerana ireny. Teny hebreo midika hoe “Tranon’Andriamanitra” izy io. Mpitsidika avy any amin’ny faritra maro no tonga mba hijery ny fomba andaminana ny asanay, sy ny fanamboarana boky sy gazety, ary mba hitsidika ny namany miasa any. Vao haingana dia nisy mpitsidika iray tena tapa-kevitra fa hanao an’ilay dia.
Vavolombelon’i Jehovah i Marcellus, ary mipetraka any Anchorage any Alaska izy. Tapaka lalan-dra izy, taona vitsivitsy lasa izay, * ka tsy mahay manonona afa-tsy teny vitsivitsy. Tsy maintsy mampiasa seza misy kodiarana izy, ary mila fanampiana amin’ny raharaha ao an-trano. Naniry mafy hitsidika Betela anefa izy. Notanterahiny io nofinofiny io, vao haingana.
Naman’i Marcellus i Corey, ary nanampy azy hikarakara ny diany. Hoy i Corey: “Tsy nanaiky mihitsy izy. Antsoiny foana aho mba hahenoany ny vaovao farany. Tsy maintsy mametraka fanontaniana mifampitohitohy aho rehefa miantso izy, satria ‘Ie’ sy ‘An an an’ ihany no teny mazava azony tenenina.” Mitovitovy amin’izao ny fandehan’ny resak’izy ireo:
“Tianao hankany aminao ve aho?”
“An an an.”
“Tianao hantsoiko ny dokotera?”
“Momba an’ilay dianao ho any amin’ny Betela ve?”
“Dia hazavaiko avy eo hoe aiza ho aiza aho amin’ny fanomanana ny diany. Faly be aho fa tratrany ny tanjony.”
Nandresy vato misakana maromaro i Marcellus mba hanaovana an’ilay dia. Kely ny fidiram-bolany ka nanangom-bola nandritra ny roa taona izy mba handoavana ny saran-dalana 5 400 kilaometatra nankany New York. Tsy maintsy nitady namana azo ianteherana koa izy noho ny toe-pahasalamany. Farany, nila fahazoan-dalana avy amin’ny dokoterany izy, ary andro vitsivitsy talohan’ny nandehanany izany vao azony.
Rehefa tonga tany New York i Marcellus, dia nitsidika ny sampana tany Brooklyn sy Patterson ary Wallkill. Nahita milina lehibe fanontam-pirinty izay namokatra boky sy Baiboly maro izy, ary nahafantatra bebe kokoa momba ny fandaminana ny asanay. Hitany koa ilay fampirantiana hoe “Ny Baiboly sy ny Anaran’Andriamanitra” sy ilay hoe “Vahoaka Iray ho An’ny Anaran’i Jehovah.” Nahazo namana vaovao izy nandritra ny fitsidihany. Tena tsy hay hadinoina tokoa ilay dia!
Maro no tsy mahita teny ilazana izay tsapany rehefa anontaniana momba ny diany nitsidika Betela. Rehefa nanontaniana anefa i Marcellus hoe tsy very maina ve ny nitsidihany Betela, dia namaly tamin’ilay hany teny nahafahany nanao izany izy hoe: “Ie. Ie. Ie!”
Nampahery an’i Marcellus ny nitsidika Betela, ary mety hampahery anao sy ny fianakavianao koa. Raisina an-tanan-droa ny mpitsidika any amin’ireo biraon’ny sampanay maneran-tany. Tongava mitsidika anay e!
^ feh. 3 Nodimandry tamin’ny 19 Mey 2014 i Marcellus, raha mbola nomanina ity lahatsoratra ity.
Asaina ianao hitsidika ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Misy olona efa vonona handray anao ao. Tongava àry mitsidika Betela!
Fampirantiana ny Tantaran’ny Vavolombelon’i Jehovah